नेपालको स्याटेलाइटको सूचना थाहा पाउन भुटानको भर - Nepali Online News Media-shikharnews.com
नेपालको स्याटेलाइटको सूचना थाहा पाउन भुटानको भर
नेपालको पहिलो भू–उपग्रह नेपालीस्याट–वानले पूरा काम गर्न एक हप्ता लाग्ने भएको छ । यसले अहिले गरिरहेको कार्यबारे सूचना पाउन पनि भुटानको भर पर्नुपर्ने भएको छ । नेपालसँग आफ्नै ग्राउन्ड स्टेशन नभएकाले भूउपग्रहबारेको सूचना पाउन भुटानको भर पर्नुपर्ने भएको हो । नेपालले भुटानसँग सूचना पठाउन अनुरोध गरेको छ । उसले सूचना पनि पठाइसकेको छ । नेपालीस्याटले पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेको छ ।
भुटानमा रहेको ग्राउण्ड स्टेशनले पठाएको सूचनाका आधारमा नेपालस्याटले पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेको छ । यसले प्रत्येक ९० मिनेटमा पृथ्वीलाई परिक्रमा गरिरहेको छ । हरेक दिन दुई देखि चारपटक नेपाल माथिको आकाशमा आइपुग्ने गरेको छ । नेपालको माथि आकाशमा आइपुग्दा प्रत्येक दिन छ मिनेट समय भूउपग्रहबारे सूचना प्राप्त हुन्छ ।
२ असारको साँझ नेपालीस्याट–वान रावण, इगुसी र स्पुकी–वान एकसाथ अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको थियो । प्रक्षेपण कार्यक्रमको अवलोकन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, जापानका लागि नेपाली राजदुत प्रतिभा राणा, नास्टका उपकुलपति डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठलगायत जापानको चुकुबा स्पेस सेन्टरमा पुगेका थिए ।
नेपालीस्याट वान अन्तरिक्ष प्रक्षेपण गर्नुअघि अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री निक हेगको नेतृत्वको छ सदस्यीय अन्तरिक्ष यात्रीको टोलीले नेपाललाई के गरौं ? भनेर सोध्दा मन्त्री पोखरेलले गो भनेपछि अन्तरिक्षमा नेपाली स्याट छाडिएको थियो ।
५ वैशाखमा अमेरिकाको भर्जि्निया राज्यको वालप्स फ्लाइट सेन्टरबाट बर्ड थ्री प्रोजेक्ट अन्र्तगतको नानो स्याटलाइट पृथ्वीदेखि चार सय किलोमिटर टाढा अन्तराष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा राखिएको थियो । २ असारबाट नेपालीस्याट वानले पृथ्वीको कक्षबाट पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्न सुरु गरेको छ ।
के छ भूउपग्रहमा ?
नेपाली नानो स्याटलाइट एक केजी तीन सय ग्राम तौलको छ । यसमा नेपाली झण्डा, नाष्टको लोगो र निर्माणकर्ताको नाम छ । भू उपग्रहले पृथ्वीको परिक्रमा गरी नेपालको भौगोलिक तस्वीर खिचेर पढाउन थालेको छ । भूउपग्रह नास्टले नेतृत्व गरेर क्यूटेकमा अध्ययनत नेपाली विद्यार्थी आभास मास्के र हरिराम श्रेष्ठसहित आठ जना सहभागी भई तयार गरेका थिए ।
गुठी पक्षधरको माइतीघरमा विशाल प्रदर्शन
गुठी पक्षधरहरुले काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन गरेका छन् । राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गुठीसम्बन्धी विधेयकको चौतर्फी विरोधपछि भूमिव्यवस्थामन्त्री मन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी थिइन् । सरोकारवालासँगको छलफलपछि यसलाई अघि बढाउने उनको भनाइ थियो । तर, गुठी पक्षधरहरुले पुनः सरकारले विधेयक अघि बढाउन सक्ने आशंका गरेका छन् । त्यसैको खबरदारीका लागि विधेयक फिर्ता भएको भोलिपल्ट राजधानीका विभिन्न स्थानबाट र्याली निकालेर गुठीपक्षधरहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
विभिन्न स्थानबाट निस्किएको र्याली माइतीघर मण्डलामा आयोजित खबरदारीसभामा गएर मिसिएको छ ।
नेपाल सरकारले चाहे जस्तो नियम लागु गर्दा नेपालमा सर्वा्धिक रुचाइएको च्यानलहरु कलर्स, स्टार प्लस, जी टीभी लगायतका सम्पूर्ण मनोरञ्जनात्मक च्यानलहरुका साथै खेलकुद प्रेमीहरुले मन पराएका फुटबल, क्रिकेट लगायत अन्य खेलहरु प्रशारण गरिने स्टार स्पोट्र्स, सोनी टेन लगायतका च्यानलहरु पनि नेपाली जनताले हेर्न नपाउने महासंघले जनाएको छ ।
एकाएक भीम रावल कसरी ओलीको पक्षमा पुगे ?
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावल एकाएक सरकारको कामको बचाउमा उभिएका छन् । केही दिन अघिसम्म रावललाई सरकारको आलोचना गरेरै फुर्सद थिएन । तर, अचानक रावल सरकारको प्रशंसामा उत्रिएका छन् । उनले देशको मुहार फेर्नका लागि नै दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भएको बताउन थालेका छन् । मंगलबार गृहजिल्ला अछामको कमलबजारमा आयोजित कार्यक्रममा नेता रावलले सरकार देशको स्रोत साधनको उपयोग र परिचालनगरी विकास र समृद्धि ल्याउन खोजिरहेको बताएका थिए ।
उनले पार्टीको जिल्ला तहका कमिटीले पूर्णता पाइसकेकाले अब छिट्टै नगर, गाउँ तथा वडा कमिटीलाई पूर्णता दिइने र पार्टी सङ्गठन र विकासका गतिविधि प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रावलले नेकपा र उसले नेतृत्व गरेको सरकारले ल्याएका राम्रा नीति र कार्यक्रमबाट प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस डराएको आरोप लगाएका थिए ।
लोकसेवा विवादको आज सुनुवाई हुँदै
सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनसम्बन्धी विवादसम्बन्धी सबै निवेदनलाई एकै साथ राखेर हेर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले मंगलबार लोकसेवा आयोगको उक्त विज्ञापनसम्बन्धी परेका चारवटै निवेदनलाई सँगै राखेर हेर्न आदेश जारी गरेको हो । ती सबै निवेदनको सुनुवाई बुधबारका लागि तय गरिएको छ ।